Hayden Panettiere သည် လာမည့် ဆဋ္ဌမမြောက် 'Scream' တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
ပင်မစာမျက်နှာ	ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း	Hayden Panettiere သည် လာမည့် ဆဋ္ဌမမြောက် 'Scream' တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
by Trey Hilburn III ကို မေလ 12, 2022
by Trey Hilburn III ကို မေလ 12, 2022 360 အမြင်များ
Hayden Panettiere လာမည့် ဆဋ္ဌမမြောက် သရုပ် ဆောင်တွင် တရားဝင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ အော်ဟစ် ရုပ်ရှင်။ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် လွတ်မြောက်လာစဉ်တွင် ဤအရာအတွက် အော်ဟစ်သံများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အော်ဟစ် ဝင်ခွင့် ပြန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ အွန်လိုင်းမှာ တီးတိုးပြောသံတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက သူမဟာ သရုပ်ဆောင်မှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်အဖြစ် ကြေငြာခံထားရတဲ့ သူမဟာ အခုအချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေနေပုံပါပဲ။ အော်ဟစ် 6.
Panettiere သည် ထိတ်လန့်စရာကောင်းသောခွေးတစ်ကောင်ကို ကစားခဲ့သည်၊ Kirby ရိဒ်. သူမသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ကာ ထို Ghostface မှ ဤဘဝတွင် ကြိုးစားမှုမှန်သမျှကို တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
"ရုပ်ရှင်အသစ်သည် Woodsboro ကိုနောက်ကွယ်မှထားခဲ့၍ အပိုင်းသစ်တစ်ခုစတင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းရုပ်ရှင်၏ဇာတ်ကွက်တစ်ဝိုက်တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူအကျဉ်းချထားသည်" အမျိုးမျိုး အစီရင်ခံစာများ။
ဒါရိုက်တာ Matt Bettinelli-Olpin နှင့် Tyler Gillett တို့သည် ဆဋ္ဌမမြောက် ဒါရိုက်တာအဖြစ် တစ်ဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ အော်ဟစ်. ဒါရိုက်တာတွေ ပြန်လာသလို Panettiere ပြန်လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ အို၊ ငါလည်း Jenna Ortega ကို နောက်ထပ်တွေ့ဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ဆေးရုံကုတင်ပေါ်တင်မကဘဲ အနီရဲရဲလေးလို။
ငါတို့တွေ့ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ အော်ဟစ် 31 ခုနှစ် မတ်လ 2023 ရက်နေ့တွင် ရုံတင်ပြသမည့်ရက်စွဲဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသမည်ဖြစ်သည်။